AC Master Card [ezikhanyisayo lesikweletu kuphela]
トップページ ＞ 言語 ＞ ズールー語 ＞ AC Master Card [ezikhanyisayo lesikweletu kuphela]
fixed-rate ezikhanyisayo uhlelo. izimali Ubuncane credit ezijikelezayo, okungamaphesenti angu amathathu lemali etholakalayo, zezakhi esingaphansi 1000 yen babanjwa 1000 yen. Ngokwesibonelo, uma imali ukusetshenziswa kwaba 80.000 yen, 3% kuba 2400 yen, ephansi ukubuyiswa kwemali isamba kuyoba 3000 yen.
yezitolo Uhlaka million 3 yen at imikhawulo eliphakeme, ukulondoloza isikhashana umsebenzi futhi kuhlangene, kungaba in jikelele credit card ukuze usethe ukuba 5 million yen we ekilasini eliphakeme.
Ngo Product Incazelo
ezezimali umthengi nekhadi lesikweletu ACOM ikhiphe, ungasebenzisa njengendlela Kurejjitokado evamile ekhaya aphesheya womthengisi master ikhadi. Kuyinto ngosuku olufanayo ekhishwe nokuhlolisiswa emfushane imizuzu engu-30. Uma ubhalisele kwi-Inthanethi, ungakwazi ukunciphisa isikhathi esiningi uma kuqhathaniswa nempikiswano phezu-the-counter. Imali yonyaka imahhala, isihloko is a ngenzuzo womuntu eneminyaka engu-20 ubudala noma ngaphezulu is esitebeleni.
inyanga usuku lokuvala ezingu-20, kodwa akusho unamathisele senzalo kanye kubuyiselwe kuze kube yinyanga ezayo izinsuku 6, esimweni buyiselo noma ngemva kwezinsuku ezingu-7, le mali kunqunywa kusukela ezinsukwini ezingu-7 ngayinye izinsuku 35 ke kufanele ukuba uya ukhokhelwe credit ezijikelezayo. Uma lokhu ukukhokhelwa yinhlama-6 izinsuku, ivese iba credit ezikhanyisayo. Ubuncane ukubuyiswa kwemali isamba ngesikhathi credit
ezikhanyisayo, okungamaphesenti angu amathathu lemali etholakalayo, zezakhi esingaphansi 1000 yen babanjwa 1000 yen. Ngokwesibonelo, uma imali ukusetshenziswa kwaba 80.000 yen, 3% kuba 2400 yen, ephansi ukubuyiswa kwemali isamba kuyoba 3000 yen. umkhawulo izinzuzo
kungenzeka ngendlela jikelele credit card ukuze usethe ukuba 5 million yen we ekilasini eliphakeme. Ngokuvamile, lapho ucabangela ukuthi iningi wesikweletu 2 million yen noma amakhadi iyona igolide okusezingeni eliphezulu noNdunankulu ikhadi we Imali yonyaka, njengoba wonyaka Imali ikhadi khulula, lithi Kuyinto elula kakhulu.
akhawunti yokukhokha indlela ibhange Ngaphezu ukuhoxiswa ngokuzenzekelayo, esitolo kokukhokhwa noma kokuthuthwa, kungase kukhethwe kusukela sikhokhwe iyiphi i-ATM ye ACOM. Ngokuvamile, i-credit card, okuzokwenza kube icala kanye angenandaba, AC master ikhadi kuyinto ngoba ikhadi ezikhanyisayo lesikweletu kuphela, kuzothatha amanye intshisekelo ngokuhambisana nenani Ukusetshenziswa kwekhadi.
AC master ikhadi for Abavakashi, akukho nokuboniswa igama lenkampani ACOM. I nesiliva njengenzuzo umbala umhlaba, ukubonisa futhi Master Card, labo ezifana usuku lokuphelelwa yisikhathi kanye nobulungu izinombolo iye yachazwa, Angazi emakhadini ACOM futhi bheka kuphi. Examination onjalo elidumile Uzithukululile, akukho muntu noma kwenziwe ngaso sonke amakhadi, umuntu ovamile awe luhlolo ikhadi, futhi uzinze ngezimali uma owokuqala, ezifana umuntu eye yabangela ukuba kube nengozi zezimali nakuba 1 Kukhona omunye ethandwa.
hhayi kuphela e-Japan njenge ikhadi master iyatholakala emazweni angaphandle. Ikhadi ikhishwe ngokushesha okukhulu, ingabe kungenzeka ukukhipha, uzobona imizuzwana 3 uphethwe Web. Nokuhlolisiswa Uzithukululile kancane, cela lula kuyinto ikhadi ukuthi ukukhipha ngisho noma kukhona ulwazi oluthile negative likhokhele ulwazi.
ezikhanyisayo credit card, kodwa uzokhokha imali ukuthi kwanqunywa ukuba asule inyanga ngayinye, njengalapho fund anokuhambisana owake wangena ngesandla, unga izinkokhelo ophanayo futhi ngokukhululeka. Imininingwane kuya ACOM Kanti futhi akudingeki. Bonisa futhi Card, labo ezifana usuku lokuphelelwa yisikhathi kanye nobulungu izinombolo iye yachazwa, Angazi emakhadini ACOM futhi bheka kuphi. Examination onjalo elidumile Uzithukululile, akukho muntu noma kwenziwe ngaso sonke amakhadi, umuntu ovamile awe luhlolo ikhadi, futhi uzinze ngezimali uma owokuqala, ezifana umuntu eye yabangela ukuba kube nengozi zezimali nakuba 1 Kukhona omunye ethandwa.
ezikhanyisayo credit card, kodwa uzokhokha imali ukuthi kwanqunywa ukuba asule inyanga ngayinye, njengalapho fund anokuhambisana owake wangena ngesandla, unga izinkokhelo ophanayo futhi ngokukhululeka. Imininingwane kuya ACOM Kanti futhi akudingeki.